Food on Wheels ayaa ka muuqda sheekada MPR ee ku saabsan maalgelinta cuntada sare - Meals on Wheels
Cunnooyinka Wheels-ka ee lagu soo bandhigay sheekada MPR ee ku saabsan maalgelinta cuntada waayeelka ah
Dhawaan Sheekada Raadiyaha Dadweynaha ee Minnesota eegay cawaaqib-xumada gobolka oo dhan ee dhimista miisaaniyadda federaalka ee barnaamijyada cuntada ee waayeelka. Metro Meals on Wheels Agaasimaha Fulinta Patrick Rowan ayaa laga wareystay saameynta ay ku leedahay barnaamijyada Cunnada maxalliga ah.
Dhammaan barnaamijyada Cunnada ee Wheels ee maxalliga ah kama helaan maalgelinta federaalka iyada oo loo marayo Sharciga Ameerikaanka ee Waayeelka ah, laakiin kuwa sidaas sameeya waxaa si xun u saameeyay qeybta miisaaniyadda federaalka sanadkii la soo dhaafay. Intii aan dhowaan helnay war wanaagsan markii Koongarasku gaadhay heshiis miisaaniyadeed ee biennium 2014-15, maalgelinta ikhtiyaariga ah ee barnaamijyada sida cunnooyinka waayeelka ah weli waa laga wada hadlayaa.
Waxaan ku rajo weynahay in Koongareesku dib u soo celin doono maalgalinta Sharciga Dadka Waayeelka ah ee Mareykanka si barnaamijyada Cunnada ee Wheels ee ku tiirsan maalgelinta federaalka ay awood ugu yeelan doonto inay siiso cunnooyin guri-geyn qof walba oo u baahan.
MPR - Miisaaniyadda dhimista ayaa ku dhacday barnaamijyada waaweyn ee Minn
Diisambar 27, 2013